စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ ကြည့်မိသူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ ထိန်းမရအောင် ဗြောင်းဆန်သွားစေမယ့် အလန်းစားပုံများ – Shwe Ba
Homepage / Cele News / စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ ကြည့်မိသူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ ထိန်းမရအောင် ဗြောင်းဆန်သွားစေမယ့် အလန်းစားပုံများ
စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ ကြည့်မိသူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ ထိန်းမရအောင် ဗြောင်းဆန်သွားစေမယ့် အလန်းစားပုံများ
By Shwe BaPosted on February 13, 2021
မော်ဒယ်လ်စုလှိုင်ဝင်းကတော့ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအနုပညာလောကမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့တာပြဲဖြစ်ပါ တယ်။အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေပြီးသီချင်းMVတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေခဲ့တဲ့ သူမကတော့ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့အပြုံးချိုလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုရတဲ့သူမကတော့ကြော်ငြာတွေကိုလည်းရိုက်ကူးလျက်ရှိနေပြီးကြွေလောက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကိုလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။သူမကတော့ သွယ်လျလှပပြီးအချိုးအစားပြေပြစ်တဲ့အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အလန်းစားပုံစံလေးနဲ့ကပြထားတဲ့Tiktokလေး တွေကိုလည်းပရိသတ်တွေရှေ့ချပြလေ့ရှိပါတယ်။
သူမကတော့ ယခုမှာအသည်းတယားယားဖြစ်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့အလှတရားတွေပေါ်လွင်နေပြီးမြင်ရသူတိုင်းကိုရင်ခုန်သွားစေခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုချပြလာခဲ့ပါတယ်။အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေဟာပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်မော်ဒယ်လ်စုလှိုင်ဝင်းရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်ေလးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်.
ေမာ္ဒယ္လ္စုလွိုင္ဝင္းကေတာ့ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားေအာင္ျမင္လ်က္ရွိေနတဲ့ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးအႏုပညာေလာကမွာနာမည္တစ္လုံးနဲ႔ ရပ္တည္ထားနိုင္ခဲ့တာျပဲျဖစ္ပါ တယ္။အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုဆက္လက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနၿပီးသီခ်င္းMVေတြမွာပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနခဲ့တဲ့ သူမကေတာ့ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့အျပဳံးခ်ိဳေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။
ပရိသတ္ေတြအခ်စ္ပိုရတဲ့သူမကေတာ့ေၾကာ္ျငာေတြကိုလည္းရိုက္ကူးလ်က္ရွိေနၿပီးေႂကြေလာက္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့အမိုက္စားပုံရိပ္ေလးေတြကိုလူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္တင္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။သူမကေတာ့ သြယ္လ်လွပၿပီးအခ်ိဳးအစားေျပျပစ္တဲ့အမိုက္စားေကာက္ေၾကာင္းအလွကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။သူမကေတာ့အလန္းစားပုံစံေလးနဲ႔ကျပထားတဲ့Tiktokေလး ေတြကိုလည္းပရိသတ္ေတြေရွ႕ခ်ျပေလ့ရွိပါတယ္။
သူမကေတာ့ ယခုမွာအသည္းတယားယားျဖစ္ေလာက္ေအာင္ဆြဲေဆာင္မႈရွိလြန္းတဲ့အလွတရားေတြေပၚလြင္ေနၿပီးျမင္ရသူတိုင္းကိုရင္ခုန္သြားေစခဲ့တဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြကိုခ်ျပလာခဲ့ပါတယ္။အမိုက္စားပုံစံေလးနဲ႔ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းေနတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြဟာပရိသတ္ေတြကို အခ်စ္ေတြပိုေစခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ေတြအတြက္ေမာ္ဒယ္လ္စုလွိုင္ဝင္းရဲ့အမိုက္စားပုံရိပ္ေလးေတြကိုျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္.
Previous post ကြည့်ရှု သူတွေကို ရင်ခုန်အောင် လုပ်လိုက်တဲ့ ရွှေရင်အစုံ လေးတွေပေါ်လွင် နေတဲ့ ပိုပိုရဲ့ အမိုက် စား ဗီဒီယိုလေး
Next post ရင်ခုန်စရာ အတွင်းသားအလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ သွန်းဆက်ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး